Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - June 24 - blog blog - jluis37.com
Croatia na Spain – ohere abuo – Croatia & Bịaruo @ 2.29
Croatia wepụrụ n’ọkwa otu mgbe mmeri 3-1 meriri Scotland, nke kwesịrị inye ha katapila ha chọrọ iji kwụọ ụgwọ maka ọkwa ikpeazụ nke asọmpi ahụ. N’aka nke ọzọ, Spain yiri onyinyo nke oge ọlaedo ha nke 2000 rue mbido afọ 2010, n’agbanyeghị mmeri 5-0 megide Slovakia. Ọ bụ ezie na Spain kwesịrị ịbụ ọkacha mmasị maka egwuregwu a knockout, echela na ọ bụ ihe doro anya. Cheta, Kroeshia mere ngwụcha iko mba ụwa afọ atọ gara aga ma ka afọ ndụ ọlaedo ha na-abịa na njedebe, ha agaghị achọ ya laa n’iyi. Site na ikike nke a iji gaa oge na ntaramahụhụ, 2.29 iji merie ma ọ bụ see na 90 nkeji dị oke mma ịbụ eziokwu. Agbanyeghị na ihe ọ bụla dị oke mma ịbụ eziokwu na-abụkarị, anyị nwere obi ike na a ga-agba ndị Croats ọkụ ma ha agaghị ahapụ ihe ọ bụla na ogige ahụ. 1 nkeji.
Italy na Austria – 1 × 2 & Ọnụ – Italy & N’okpuru 3.5 @ 1.88
Ndị havetali abụrụla otu n’ime akụkụ ndị na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ na mpaghara otu nke Euro. Imeri atọ na enweghị ihe mgbaru ọsọ enyerela bụ mmalite dị ka ịchọrọ. Usoro a bara ụba ejiriwo ihe yiri ka ọ bụ ezigbo onye mmegide na Austria kwụọ ha ụgwọ. Ndị otu David Alaba nwere ike nweta mmeri abụọ site na egwuregwu atọ ha, mana anyị agaghị ama jijiji ma ọ bụrụ na asọmpi ha kwụsị ebe a. Agbachitere Italytali bụ ọzọ, a na-enweghị ike ịbanye karịa 51 mpaghara dịka ha na-emeri mmeri 2006 World na n’akụkụ Austria nke na-enweghị ikike n’ihu ndị dotali na-eme, anyị na-atụ anya mmeri Italytali na-enweghị ihe karịrị atọ. Nkeji 2.
Belgium na Portugal – N’ime 2.5 @ 2.08
Kemgbe mmalite nke afọ kalenda 2021 ndị otu abụọ a nwere ihe mgbaru ọsọ 2.625 (BEL) & 2.125 (POR) n’ihe gbasara 8 egwuregwu ọ bụla. O doro anya na ụfọdụ n’ime ndị a bụ egwuregwu Enyi na Enyi, dịka Belgium na-akụ Belarus 8-0 na ndị Portuguese na-eti Israel 4-0, mana nke a abanyela na mbido nke Euro – ndị otu abụọ nwetara goolu asaa na nke otu. otu n’ime usoro isii ndị metụtara abụọ a nwere U2.5. Ewezuga ọnụ ọgụgụ ndị otu na-eyi egwu egwu na pitch (na subs bench!) Bụ ihe ịtụnanya, nke ndị goolu Ronaldo na-ebute ụzọ (nkwado maka akpụkpọ ụkwụ ọla edo) & Lukaku (2nd fav). Enwere ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ na ọrụ maka abụọ ndị a site na ndị nkedo ha na-akwado nke ndị egwuregwu klas ụwa: Kevin De Bruyne, Eden Hazard & Dries Mertens maka Belgium; Bruno Fernandes (ọ bụrụ na ọ rutere na pitch…), Bernando Silva & Diogo Jota maka Portugal. Site na 38yo Pepe na GK dị ala na obi nke nchekwa Portuguese, na nhọrọ atọ nchekwa dị iche iche na egwuregwu atọ niile sitere na Roberto Martinez mgbe Timothy Castagne chịrị maka asọmpi ahụ, nwere ike ịwakpo ụdị nchebe kachasị mma? 1 nkeji.
MMA UFC – Cyril Gane vs Alexander Volkov – Onye Uma – Volkov @ 2.37
Ciryl Gane bụ onye na-abịa ma na-abịa n’ihu na mmeri ndị na-adịbeghị anya Jairzinho Rozenstruik na Junior dos Santos. Gane mere mmalite nke UFC na 2019, ma ugbu a, ọ na-eguzo na 8-0 na nkwụsị isii: knockouts atọ na ntinye atọ. Volkov nwere ahụmịhe mmeri dịka onye mbụ M-1 na Bellator belt. Volkov jidere ihe ndekọ 33-8 na mmeri 22 knockout. Ndị agha abụọ a na-elekwasị anya na nkwụsi ike, na-anwale obere mbọ, n’ihi ya, nke a kwesịrị ịbụ ihe mgbawa na-agbawa agbawa. Na-atụ anya ka onye Russia nwere ahụmahụ gabigara Bon Bon. 1 nkeji.
CSGO ESL Gamers Without Border – FaZe Clan vs BIG – Map niile karịrị 2.5 @ 1.88
Na-atụ anya ka egwuregwu a gaa ebe dị anya, ruo na eserese nke atọ, ọkachasị n’ihi ihe abụọ. Nke mbu, na-elele akara ngosi mmeri nke otu ọ bụla maka ọnwa atọ gara aga, onye ọ bụla n’ime ha nwere ike ịnwe okomoko nke ịhọrọ map ha siri ike na. Maps kachasị mma ha adabaghị na ibe ha, FaZe nwere ike ịga maka Mirage ma ọ bụ Inferno na Big nwere ike ịga Vertigo, Dust2, ma ọ bụ Ofefe. Onu ogugu mmeri nke uzo ha choro bu ihe dika 70% ma obu ka nma nke putara na onye obula ha were otu map. Ihe nke abuo bu akuko banyere FaZe Clan. Ha na-agbasi mgba ike inweta ezigbo nsonaazụ mgbe ha bịanyere aka na nnukwu aha dịka olofmeister ma ọ bụ Twistzz. Ha nọ ugbu a na egwuregwu 7 na-efu efu, agbanyeghị, ọ bụghị ihe ọjọọ dịka o yiri. Site na egwuregwu asaa ahụ, 6 kachasị mma-3 ha niile wee gaa na eserese nke atọ! Ihe 1.88 nwere ike ịbụ ihe ịga nke ọma ka m wee tinye nkeji 2 ebe ahụ.
Geelong Cats na Brisbane Lions – 1 × 2 – Geelong @ 2.17
Anyị na-eme njem Down N’okpuru izu a maka ihe dị ka nnukwu uru. Na-abịa mmeri mgbe siren megide Bulldogs, Geelong na-ele anya na ọ dị mma. Brisbane ga-esiri ike ịkụ aka n’ụlọ, mana Geelong anọgidesi ike na egwuregwu ndị ọzọ. Geelong meriri 4 nke 5 gara aga na Brisbane na mmeri 1 na mbido oge a. Na-atụ anya ka nke a bụrụ egwuregwu dị nso. Nkeji 2
Los Angeles Clippers na nke Phoenix Suns – Onye mmeri – Suns @ 1.84
Anyanwụ bụ ezigbo ahịa. Ha na – eduga ná njedebe nke Nzukọ Ọdịda Anyanwụ 2-0 mgbe ha merisịrị ndị Clippers na egwuregwu ụlọ ha abụọ iji mepee usoro ahụ, ma ọ bụ naanị mmeri abụọ ọzọ na – anọghị na nkwụsị na NBA Finals. Ọbụna ha jisiri ike mezuo nke a na-enweghị onye isi na onye isi kpakpando, Chris Paul. Ọ laghachila ugbu a maka egwuregwu 3, dị njikere inyere ndị Suns aka mmeri nke atọ ha n’okporo ụzọ na Los Angeles. Ndị Clippers agbachitere ọgụ dị egwu na egwuregwu abụọ na Phoenix n’usoro a, na-agbadata n’akụkụ dị warara n’akụkụ abụọ ahụ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịtụ anya na ha ga-aka mma n’ụlọ ebe a, mana na Phoenix dị ka obere ọkacha mmasị na ịlaghachi onye ọkpụkpọ dị oke mkpa (ebe ndị isi Clippers Kawhi Leonard ka na-anọghị na mmerụ ikpere) anyị enweghị ike iguzogide buru Suns iji gaa n’ihu ha Oge Cinderella na njedebe dị nso na onyinye kachasị elu. 1.5 nkeji.
Melbourne City vs Sydney FC – Iji ruo eru – Sydney FC @ 2.01
Obodo Melbourne nwere ike ịbụ otu kachasị mma n’oge oge a, mana Sydney FC bụ ndị otu nọ n’ụdị, na-emeri egwuregwu 6 ikpeazụ ha na trot. Ha jikọtara ma Bobo na Adam Le Fondre dị ka ọgụ ha na-aga n’ihu (ha abụọ bịanyere aka na nkera nke abụọ nke oge ahụ) ma ha abụọ na-agbanye ihe mgbaru ọsọ. Sydney nwere omume nke ịmịpụta nsonaazụ na nnukwu egwuregwu ndị a, ha emeriwo 2 Grand Finals gara aga na ET ma ọ bụ na ntaramahụhụ, ọ yikwara ka ha nwere njedebe na nnukwu egwuregwu ndị a. Obodo Melbourne na – efu Jamie McLaren nke na – agba ọsọ bọọlụ a ga – emerụ ha ahụ. Mgbochi ndị mmadụ pụtara na ha agaghị enwekwa nkwado ụlọ ha nwere ike nweta ma a sị na ọ bụghị. 1 nkeji.
Otutu nsogbu – 320.21 *
* Nsogbu isiokwu ịgbanwe
Ọ bụrụ n’ịchọta nhọrọ anyị n’izu a, nweere onwe gị idetuo site na egwuregwu: 11670679.